Board Meetings – Page 3
Posted on April 18, 2019 April 20, 2019 AuthorUser2Leave a comment
Karachi, Nagina Cotton Mills Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 25, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has declared the closed period from April 18, Read More …
Karachi, Al-Ghazi Tractors Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 25, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has declared the closed period from April 18, 2019 Read More …
Karachi, Al-Khair Gadoon Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 26, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has declared the closed period from April 18, 2019 Read More …
Karachi, Siemens Pakistan Engineering Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on May 02, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has declared the closed period from April Read More …
Karachi, Saif Textile Mills Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 26, 2019 at Islamabad. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has declared the closed period from April 19, Read More …
Karachi, Azgard Nine Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 26, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has declared the closed period from April 19, 2019 Read More …